नेपालमै सात वर्ष देखि आजिवन गुफा बस्नुभएका विदेशी नागरिकको प्रेरणादायी सन्देश | धर्म न्युज | Dharmanews.com
Home अन्तर्वार्ता नेपालमै सात वर्ष देखि आजिवन गुफा बस्नुभएका विदेशी नागरिकको प्रेरणादायी सन्देश
नेपालमै सात वर्ष देखि आजिवन गुफा बस्नुभएका विदेशी नागरिकको प्रेरणादायी सन्देश
विदेशी लामाको सन्देशमुलक अन्तरवार्ता
सात वर्ष देखि नेपालको सिन्धुपाल्चोकमा गुफावास बस्दै आउनुभएका एक विदेशी लामाको यो सन्देशमुलक अन्तरवार्ता निकै नै रोचक छ। र साधारण नेपाली मात्र नभएर लामा भिक्षुहरुका लागि पनि एकदमै प्रेरणादायी छ। तसर्थ आउनुस हेरौं सुनौं एकजना तिब्बती लामाले लिएको उक्त भिडियोमा उहाँ के भन्नु हुन्छ।
लामा: लामा ला टाशी देलेक
विदेशी लामा: फेरि पनि टाशी देलेक, आज त धेरै पटक टाशी देलेक अभिवादन भयो ।
लामा: अहिले तपाईं गुफा बस्नुभएको छ हैन?
विदेशी लामा: हो हो
लामा: काग्युपाहरु त पहिले देखि नै हिमाल ओडार तिर गुफा बस्ने परम्परा धेरै नैं छ नि हैन?
विदेशी लामा: पहिले पहिले हाम्रो काग्यु लामाहरु गुफा बस्ने खबर धेरै सुनिन्थ्यो। आजकल त धेरै छैनन। उनीहरु गुफा सकेपछि मैले पर्याप्त ध्यान गरिसकें भन्ने ठान्छ अनि मलाई एउटा धनी चाइनिज स्पोन्सर चाहियो सोच्छ, एउटा राम्रो कम्प्युटर किनेर, दिन भरि फेस्बुकहरु खेलेर बस्नुपर्छ हैन। अब हाम्रो लामाहरुमा त्यो नपुग्दो रहेछ नि, तिमीहरुले कुरा बुझ्न सकेन, तिमीहरु गुफा तिर जानुपर्छ अनुभव र ज्ञान बोध नभएसम्म ध्यान गर्नु पर्छ नि भन्दा उनिहरु प्रायजसोले त्यो कुरा मनपराउँदैनन।
लामा: उनिहरु के कुरा चाहिँ मन पराउँछन् त?
विदेशी लामा: उनिहरु सिंगापुर हङकङ जस्तो देशहरुमा जाने त्यहाँ को ठुलो धर्म केन्द्र हरुमा बसेर लामाहरुको काम गर्न रुचाउँछन्।
लामा: ध्यान गर्नु त हाम्रो काग्यु परम्परामा एकदमै महत्वपूर्ण हो नि हैन?
विदेशी लामा: एकदमै महत्वपूर्ण हो नि। क्याब्जे तेन्का रिन्पोछेले पहिला मलाई सिधै भनुभएको थियो- अनुभव र ज्ञान बोध नभइकन गुफा समापन गर्नु भनेको अर्थहिन कार्य हो। झ्योवोजे तारानाथले पनि भन्नुभएकै छ- अनुभव र ज्ञान बोध नभइकन गुफा सकाउँदा केहि फाइदा हुँदैन रहेछ। अनुभव र ज्ञान बोध नभएसम्म गुफा ध्यान बस्नै पर्ने हुन्छ। त्यसरी न त अभ्यास हुन्छ न फाइदा हुन्छ। अनि भविष्यमा हामी अरु विभिन्न प्राणीहरुलाई भलो गर्न पनि त सक्दैनौं नि।
लामा- तपाईं गुफा बसेर कति वर्ष भयो?
विदेशी लामा: ७ वर्ष भयो।
लामा: अनि तपाईंको घर कता हो? विदेशी लामा: म जर्मनीबाट हो। लामा: तपाईं अब जर्मनी फर्कनुहुन्छ?
विदेशी लामा: फर्किन्न।
लामा: किन नफर्किने
विदेशी लामा: अब उता गयो भने परिवार आफन्तहरु भेट्नुपर्छ, कुरा गर्नुपर्छ, समय खेर जान्छ नि, स्वदेश त्याग्नु जिनपुत्र आचरण हो भनिन्छ नि, आफ्नो ठाउँ त्याग्नु एकदमै जरुरी हो।
लामा: अनि तपाईं जिवनभर गुफा बस्ने हो त?
विदेशी लामा: हो।
लामा: जिवन र साधना समान भन्ने यहि हो नि हैन? विदेशी लामा: होला।
लामा: अनि काग्युपाको लामाहरुलाई केहि सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
विदेशी लामा: हुन्छ। लामा: सन्देश दिनुस न त।
विदेशी लामा: मलाई क्याब्जे तेन्का रिन्पोछेले सुनाउनु भएको काधाम्पाको उपदेश सुनाउन चाहन्छु। चिनजान व्यक्तिहरु धेरै भेटिरह्यो भने धेरै ध्यान गर्न सकिन्न। जहिले पनि विभिन्न विचार फैलिरहन्छ, मैले उसलाई यसो गर्नुपर्छ, उसलाई यसो भन्नुपर्छ, भोलि उता जानुपर्छ आदि इत्यादि, अनि अभ्यास पटक्कै शुरु गर्न सकिन्न। एक्लै बस्यो, ध्यान गर्यो भने हरेक दिन चार वा छ सत्र गर्दा अति उत्तम हुन्छ। अनि विस्तारै अनुभव जस्तो, सक्यो भने भविष्यमा ज्ञान बोध जस्तो साँच्चिकै हुन्छ। गुरुहरुले ज्ञान बोध गरेको कुरा सत्य हो। म आफैंले त्यस्तो ज्ञान बोध केही गरेको छैन।
लामा: अनि तपाईं गुफा बस्नुभएछ, लामो समयसम्म ध्यान गर्नु भएछ, अनुभव र ज्ञान बोध हुने बेला भयो होला नि?
विदेशी लामा: सात वर्ष बसे पनि त्यस्तै हो, कहिले काँही माथि डाँडामा ठुलो ढुङ्गामाथि बसेर अलि ध्यान गर्छु आनन्द आउँछ, अनि मान्छे नभेटिने घुमौरो बाटो हुँदै कोठामा फर्किन्छु, खाना पकाउँछु साधना जप हरु गर्छु।
लामा: अनि दिनमा कति पटक ध्यान बस्नुहुन्छ?
विदेशी लामा: दिनमा चार सत्र बस्छु। ३ बजेपछि हाम्रो सोल्खा महाकाल भेरनाग महाकाल षष्ठभुज हाम्रो भेन्छेन गुम्बाको सोल्खाहरु पुरै पाठ गर्छु।
लामा: तपाईंको यस्तो सराहनिय अभ्यासलाई नमन साधुवाद छ। एकदम राम्रो हो। तपाईंले भनेको जस्तै साधना ध्यानाभ्यास भनेको एकदमै महत्वपूर्ण हो। पहिलेका काग्युपा गुरुहरु साधनाको ध्वजा गाड्न सफल थिए, तिर्थस्थल हिमालपहाडतिर डुल्थे, तर आजकल हाम्रोमा त्यस्तो देख्न पाइँदैन नि, तर तपाईं एउटा विदेशी यस्तो अनकन्टार तिर्थस्थलमा गुफा बस्न सक्नु एकदमै राम्रो हो। बुद्ध शासन प्रवर्द्धन गर्ने भनेको यहि हो।
विदेशी लामा: मलाई मुख्य गरि गुरुको आशिर्वाद प्राप्त भएको छ जस्तो लाग्छ। क्याब्जे तेन्का रिन्पोछेले मलाई यति धेरै दिनुभएको छ, अब त्यसलाई अभ्यास गरेन भने त्यो सबै व्यर्थै खेर जान्छ नि हैन।
लामा: हो हो।
अनुवादक: श्री पेरिक रिन्पोछे
Previous articleकाठमाडौँका बौद्धमार्गी कालभैरव पछाडि नटेक्नुको कारण
Next article!!! बुद्धिष्ट अध्ययन तथा अभ्यासकर्मीहरुका लागि खुशीको खबर !!!